Yintoni Eyithathile Ukuba Yi-Contestant "Yokusula?"
Oko Kwathatha Ukuba Kwi-Hit ABC Show
Ukuncintisana kwe-ABC yangempela kubonisa ukuba "Ukuhlenga" kubonakalisa abantu abanesibindi abaye bafumana imingeni emihle yemimandla ngendlela eyahlukeneyo, eyenzelwe ukuhamba nabo. "Ukuhlenga" kwahlawuliswa nje ngokuba inkqubo enkulu yehlabathi yokukhuseleka kunye nabaphikisanayo babengahlekelwanga ngentlonelo kulo mboniso, banokuvuyisa ababukeli.
Nangona konke oku, okanye mhlawumbi ngenxa yoko, abantu abaninzi babonakala befuna ukuba yingxenye yomboniso, kodwa inkcitho, yashiya ukunyuka ngo-2014, kodwa iinkcukacha ezigcinwe kwi-ABC.com kunye nezinye iinkonzo zokubhaliselwa iiyure zokuzonwabisa, kunye nabancinci abaninzi abaye bathatha oko kuthathele ukuyenza ngenkqubo yesicelo.
Indlela abaqhubi be-Contestants bafumana ngayo kuMboniso
Abaqhubi bezemidlalo bachongwa ukuba bancintisane kwimiboniso esekelwe kwinkqubo yesicelo, nge-intanethi okanye ngeposi. Ukufakwa okuqhelekileyo kufakwe igama, idilesi, umsebenzi, iinombolo zeefowuni, i-imeyile, iifoto zandul 'umdla zentshumo, kunye nenkcazo emfutshane yeso sizathu sokwenza umncintiswano omkhulu.
Njengomveliso we-Mystic Art Pictures, amalungu ewebhusayithi yenkampani angenise izicelo ngokucwangcisa "icandelo". Ubugcisa be-Mystic bujongene nokukhangela imibala eyahlukeneyo yemidlalo kunye neyona nto, ngoko ke le ndlela yayiyindlela ekhethiweyo yabathengi ukuba bafake izicelo.
Enye into yokuba abaphambili abafunekayo ngokugqithiseleyo babefanele baqaphele kukuba loo mboniso yayivame ukuba neengqungquthela. Ngoko, ukuba beyingxenye yeqela elalifuna ukudlala okanye babe nefuthe elikhethekileyo ngobuntu babo, umsebenzi, okanye izinto zokuzilibazisa, iziqwenga ezithe zanikwa ithuba elifanelekileyo lokufaka isicelo.
Iimfuno zokufaneleka zokuthi "Ukuhlenga" abathathi-nxaxheba bathe bahleleke kodwa baqhubeka bebonisa umboniso kunye nabathile bamncintisana kakhulu, abaneminyaka engama-40 ubudala.
Ngokugqithisileyo, lo mboniso wawucacisiwe nakwabahlali baseCalifornia, ngoko ubungqina bokuhlala nabo babuye bafaka isicelo-ininzi kwimimiselo yempilo nokhuseleko elawula imisebenzi ephathekayo yolu hlobo.
Kwakukho neemfuno zokufaneleka eziye zatsho ukuba ziphi uhlobo lwabalandeli ababukeka befuna ukuquka "ukuzonwabisa, ukunqwenela ngamandla, ukuphuma," kunye "nokuhleka kweentlekisa." Abafake izicelo bakhuthazwa ukuba bafunde ukushicilelwa okufanelekileyo kwifom yewebhusayithi ukuqinisekisa ukuba banobungqina bokuba ngabemi baseMelika kwaye bazimisele ukuvela kumabonwakude.
Inkontileka esemgangathweni yanikezelwa kumqhubi ngamnye oye wavela kwisiboniso egunyazisa ukusetyenziswa komfanekiso wabo ngezinto zokupapasha kunye nokuxhomekeka kwexanduva kwimeko yokulimala. Oku kuqhelekileyo phakathi kwemiboniso yemidlalo, ngokukodwa ezo zinto zibandakanya iingxaki zomzimba ezinjenge-"Survivor" okanye "Ukwesaba into."
Imiboniso ekhethekileyo kunye neeNkqubo
Ngoxa i-"Ukuhlenga " yayinomdla wokubonisa iifowuni ezivelele kakhulu entwasahlobo nasekuqaleni kwehlobo, kwakukho izihlandlo xa izipapawu ezikhethekileyo zibhalwa njengeprogram yesiganeko. Ngokomzekelo, kwakukho "i-Bowing Bowl " ekhethekileyo eyayibanjwe ngo-2009 " Super Bowl ," eyayinomxholo webhola lebhola.
Ngokutsho kweDatabase ye-Movie Database, iziqendu ezisezantsi zibonisa zonke iindawo ezizodwa zithatha isihloko esithile. Phakathi kwazo kwakukho isiqephu seNkcazo yesi-7 esithi "All-American Wipeout" ebonisa umxholo wembali yaseMelika enezityebi eziquka "U-Space Race" ukuqala umboniso kunye neSiqendu 6 esibizwa ngokuthi 'Imidlalo Yase Ex' apho i-boyfriends zangaphambili , kwaye abatshatileyo banomncintiswano ukuze bazame ukukwenza ngekhosi.
Abaqhubi kwiincwadana ezikhethekileyo badla ngokugqoka izambatho zeqela, iingubo ezimnandi, kunye nepeyinti yomzimba kunye nomzimba.
Kwiinkqubo zophicotho, abavelisi babaziwa ngokukhetha abafaki zicelo abaninzi.
I-Continental Drift Theory: I-Revolutionary and Important